Waa maxay qorshaha Farmaajo ee ka dhanka ah Ceel-waaq? | KEYDMEDIA ENGLISH
Waa maxay qorshaha Farmaajo ee ka dhanka ah Ceel-waaq?
Tan iyo markii uu Maxamed Cabdullahi Farmaajo, noqday Madaxweynaha Soomaaliya, horraantii 2017, gobolka Gedo ayaa ahaa caqabad gobol, [Juballand] iyo mid heer federal, taasoo unuggeedu yahay xasarad qabiil iyo damaca boob doorasho
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihii hore Farmaajo ayaan wali ka quusan carqaladeynta dhameystirka doorashooyinka, wuxuuna billaabay qorshe cusub oo uu doonayo inuu ku qalqal galiyo doorshada 16-ka kursi ee Gobolka Gedo.
Sida ay xaqiijinayaan xogo ay Keydmedia Online, ka heleyso Madaxtooyada, Farmaajo ayaa labadii habeen ee la soo dhaafay kulamo la lahaa saraakiil ciidan, wuxuuna ku amray in ay is hor istaag ku sameeyaan doorashada Ceel-waaq oo dhawaan billaabaneysa.
Sidoo kale, wuxuu kulamo kala duwan la qaatay, xubno ku jira Guddiga Doorashooyinka heer Federaal, oo dhankiisa u janjeera, wuxuuna ku wargaliyay in ay si degdeg ah ugu safraan Garbahaarrey, kuna qabtaan doorashada kuraasta taalla gobolkaas.
Xubno uu ku jiro Cabdishakuur Cali Mire, ayaa loo xir saaray karkarinta arrinkaan, waxaana magaalada tagi doona ciidan uu hoggaaminayo eedeysane Kullane Jiis, oo ay ku jiraan saraakiil Itoobiyaan ah, oo dhawaan uu kulamo kula qaatay degmada Doolow.
Dhawaan Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal [FEIT] ayaa degaan doorashada 2-aad ee Jubbaland, ka raray Garbahaarrey una baddelay Ceel-waaq, kadib hal sano oo maamulka magaaladas diideen in doorasho dhacdo iyagoo ka amar qaadanaya Farmaajo.
Guddigu wuxuu raridda kuraastaan u sababeeyay, in ay lama huraan tahay in 16-ka kursi la doorto, ka hor int aan loo dareerin doorashooyinka Gudoonka Golayaasha iyo Madaxweynaha, wuxuuna sheegay in caqabad amni ka jirto magaalada Garbahaarrey.
Guddigu [GHDHF], wuxuu maamulka Garbahaareey, ku eedeeyay in ay hor istaageen xubno ka socday Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka oo magaalada ku tagi lahaa booqasho loogu kuur galayay xaaladaha amni, si doorashadu uga dhacdo.